Tombontsoa amin'ny talantalana fandefasana HEGERLS:
Ny rakotra drive-in voalohany dia forklift izay miditra mivantana amin'ny faritry ny trano fitehirizana ary mametraka ny entana eo amin'ny talantalana. Tsy maintsy betsaka ny fantsona forklift. Ity fomba ity dia misy fatiantoka betsaka. Mila fotoana sy ezaka izany, izay misy akony lehibe amin'ny fahombiazan'ny fitantanana an'ity trano fitahirizana ity. Ny fepetra ara-teknikan'ny mpandraharaha dia avo lenta, ary misy ny loza mety hitranga mandritra ny fiasan'ny forklift miditra ny arabe; ankehitriny dia navadika ho fitoeran-jotra izy io, ny forklift ihany no mila miasa eo anoloana ny trano fitehirizam-bokatra, ary hitateran'ny entana ny entana any amin'ny toerana voatondro. Ny famindrana ny fiara fitateram-bahoaka eo anelanelan'ny fantsona isan-karazany dia vitan'ny forklift. Ity programa ity dia manatsara ny fahombiazan'ny asa ary mahomby sy azo antoka.
Ny tombony manokana an'ny
Ireto misy talantam-piantsenana HEGERLS:
1. Ny forklift dia tsy mila miditra amin'ny làlambe, mamonjy fotoana fandidiana ary manatsara ny fiarovana ny mpiasa sy ny entana.
2. Ny fahombiazan'ny fitehirizana ny entana ao amin'ny trano fanatobiana entana dia nohatsaraina betsaka.
3. Ampiasao tanteraka ny habaka fitahirizana, ny tahan'ny fampiasana ao amin'ny trano fitehirizana dia mihoatra ny 80%.
4. Ho an'ny karazana vokatra samihafa dia azo alefa amin'ny alàlan'ny fantsona.
5. Raha ampitahaina amin'ny talantalana drive-in ary amin'ny alàlan'ny talantalana, milamina ny rafitra ary avo kokoa ny fiarovana.
6. Fialana voalohany sy fidirana voalohany.
7. Azo ampiharina amin'ny entana be dia be sy santionany amin'ny entana, toy ny sakafo, zava-pisotro, akora simika, paraky sy vokatra hafa tokana misy andiam-be sy entana tokana. Izy io dia mety indrindra amin'ny tontolo fitahirizana mangatsiaka.
Manodidina ny endrika fitehirizana roa:
1 Rafitra fitsangantsanganana
Ny garazy shuttle dia misy fiara fitateram-bahoaka, haingam-pandeha haingam-pandeha, talantalana, mpampita entana fitehirizana sy rafitra fitehirizana trano fitehirizana. Izy io dia mety amin'ny fitahirizana boaty toy ny baoritra na boaty plastika, ary manohana fitehirizana mifangaro.
2 Fitaovana fitsangantsanganana
Ny talantantan'ny sambo dia afaka manatsara ny fampiasana ny habaka hidirana amin'ny pallet haingana, mampihena ny vidin'ny fametrahana (toy ny fampangatsiahana, ny vidin'ny fikarakarana na ny fikojakojana), ary mampitombo ny fahafaha-misaina. Tsy mitovy amin'ny rafitry ny fiara fitateram-bahoaka izay mampiasa ankamaroan'ny fidirana amina boaty, ny talantalana mifindrafindra dia manao asa fidirana amin'ny vondrona paleta.
Teo aloha: Rafitra fitehirizam-bokatra fitehirizana trano avo lenta
Manaraka: HEGERLS mpihazakazaka radio